रोचक Archives - Page3of 18 - Nayabulanda.com
काठमाडौं । प्रेम करुणा होइन भावना हो । यो हरेक मानिसको जीवनको एक हिस्सा हो । जीवन भनेको मात्र शरीर होइन । मानिसको भोगाइ र व्यवहार हो । एउटा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका भोगाइ र अनुभूतिको समग्रता नै त्यो व्यक्तिको जीवन हो । जसभित्र प्रेम पनि पर्छ । प्रेम जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । प्रेमबिनाको जीवन अपूर्...
- नेपाली हेल्थ महिनावारी हुनु अघि र भएपछिका केही निश्चित दिनमा यौन सम्पर्क गर्नाले गर्भ रहँदैन भन्ने पुरानो मान्यता छ । जसलाई अहिलेका आधुनिक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले विज्ञहरुले परिवार नियोजनको एउटा विकल्प अर्थात ‘सेफ सेक्स पिरियड’ भनेर मानेका पनि छन् । आज हामीले त्यहि कुरामा चर्चा गर्दैछौँ, कुन द...
-अनिल तिखत्री कुनै समय मैले पनि तिमीलाई मन पराको थे! त्यही कुरा तिमीलाई भन्न कति धेरै डराको थे!! बलापनकै साथी संगी सँगै खेल्थ्यौं लुकामारी! थाहा छ लाटी म त तिम्रो दिल चोरेर हराको थे!! दिनमा साथ हुन्थ्यौ सधैं उकालीमा ओरालीमा! हरेक रात तिमीलाई सम्झी बेहोसीमै कराको थे!! &nb...
नेपाली हेल्थ एजेन्सी । यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । र, खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो । तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाईरहेको पाइन्छ । कि खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्खलन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशम...
काठमाडौं । महिलाहरू पनि पुरुष जस्तै सेक्सबाट सकेसम्म आनन्द लिने प्रयास नगर्ने होइनन् । तर केही महिलाहरु सम्भोगको दौरानमा मात्र खुल्ने भएतापनि बहुसंख्यक महिलाहरु पार्टनरले आफ्नो यौन चाहना बुझेर सोही अनुसारको सन्तुष्टि देओस् भन्ने कुरामा लालायित हुन्छन् । कति पुरुषहरुलाई पुरुष जस्तै महिलाहरू कसरी चरम उत्...
कुनै पनि कार्यालय वा कम्पनीले आफूकहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारणहरु के-के हुन सक्लान् ? कुनै गम्भीर गल्ती वा लापरबाही गरेमा, आफू कार्यरत निकायलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेमा वा गम्भीर नैतिक पतनको काम गरेमा आदि-आदि । तर, अमेरिकाको एक कम्पनीले चाहिं बिहे अगाडि नै सम्भोग गरेको अभियोगमा आफ्ना ९ ज...
माङसेबुङ : "घुमेर त समय पाे खेर जान्छ" काम नगरी खान पाइन्दैन । "घुम्ने" शब्द सुनेपछि यसाे भन्ने ६०-७० उमेरका आमाहरुले बुढेसकालमा पहिलाेपल्ट श्रीअन्तु घुम्ने अवसर पाएका छन् । हुन त उनीहरुले नयाँ ठाउँ पहिलाे पटक पुगेका र घुमेका हाेइनन् । आफ्नाे जीवनकालमा धेरै ठाउँ पुगेकाे बताउने यिनीहरुले तर घुम्नकै लागि भने ती ठाउँ ...
एजेन्सी : अमेरिकामा एक तीन बर्षीय बालकमा अचम्मको शारीरिक समस्या देखा परेको छ । त्यो समस्या अरु केही नभएर उसको जिब्रो हो । तीन बर्षको बालकको जिब्रो उसको मुखभन्दा चार गुण ठूलो छ । बालकको यो अवस्था देखेर मानिसहरु अचम्ममा परेका छन । चिकित्सकहरुले बताए अनुसार यो एक दुर्लभ रोग हो । यसलाई बेकविथ वाइडम्यान सिन्ड्रोम भनिन्छ ...
इलाम : रातोपुल स्थित रकहाउस क्याफेमा गीतकार कान्छा बाजेको नयाँ गीत याराक्मा हौ सोल्टिनी ज्युको अडियो र भिडियो सार्वजनिक भएको छ । डम्बर नेपालीको संगीत रहेको गीतमा डम्बर नेपाली र दिपक लिम्बुको संयुक्त स्वर रहेको छ । गीतलाई भिजुवल स्टोरी निर्देशन किरण चम्लिङ राई र छायाँकन भुपेन्द्र तुम्बाहाम्फेले गरेका छन...
इलाम : अञ्जु पन्त र इलामका थीर कोइराला बीच बिहे गर्ने तयारी भएको छ । दुबैको परिवारमा बिहेको कुराकानी चलिरहेको भए तापनि मिति भने तय भएको नभएको बताइएको छ । करिब १० वर्ष पहिले गायक तथा संगीतकार मनोजराज र उनको सम्बन्ध बिच्छेद भएको हो । त्यस पश्चात् एक्लो जिवन बिताइरहेकी गायिका पन्तले अहिले बिहे गर्ने सुरु ...